N'otu oge, Mars, akụkọ dị mkpirikpi banyere mgbanwe mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
N'otu oge, Mars, akụkọ dị mkpirikpi banyere mgbanwe mgbanwe ihu igwe ya
David melguizo | | Climatology, Meteorology
Mars na Earthwa
Izuụka NASA wepụtara ọha na eze vidiyo nke na-achikota ihe onodu ubochi nke Mars ọ bara uru ịrara ahịrị ole na ole na ntopute nke ụwa "uhie" gbara agbataobi. Anyi maara site na omumu ndi emere, onyogho weghaara na ihe nlere nke ndi njem di iche iche weghaara na ngbanwe onodu ubochi ya yiri nke uwa.
Site na njirimara Martian a na-ahụ anya site na ụwa site na teliskop, anyị nwere ike igosipụta ikuku nwere igwe ojii na-acha ọcha ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ụwa, mgbanwe oge a na-agbanwe dị ka nke ụwa, ụbọchị 24, ọgbọ nke ájá ájá na ịdị adị nke okpu nkpuru ahihia na okporo osisi na-eto n'oge oyi. Ọ dị ka ọ maara nke ọma, nri?
N'ihi ọnọdụ ya dị nnọọ ala na ọnọdụ okpomọkụ, ịdị adị nke mmiri mmiri n'elu ya ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume, nke na-egosi Mars dịka mbara ala ọzara nke nwere ikuku dị nro nke CO2. N’aka nke ọzọ, Martian geology nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke craters, ugwu mgbawa na kansọn n’etiti ndị ọzọ egosila anyị dịka otu n’ime ihe zuru oke na mbara igwe.
Site na usoro okike na geomorphological achọtara, enwere ike ịmaliteghachi mmalite ya. Achọpụtala ọwa mmiri na-asọba na ụfọdụ oghere, dị nnọọ ka ndị ahụ a hụrụ n'ụwa n'ihi mbuze nke osimiri na iyi na-emepụta, nke na-egosi ngbanwe na-aga n'ihu nke mmiri n'elu mmiri nke mepụtara mbuze a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri mmiri.
Imirikiti ọwa mmiri ndị a yiri ka ha metụtara oghere oge ochie, nke mere ka anyị chee na ihu igwe nke kwere ka mmiri mmiri dị n'elu mmiri mepụtara na mmalite nke akụkọ ntolite ụwa. Nkọwa ezi uche dị na ya ga-abụ ịdị adị nke ikuku oge ochie nke jikọtara karịa nke ugbu a, nke nwere mmetụta griinụ nke ga-ebuli ọnọdụ okpomọkụ.
Enweghi ike ide ikuku a karia CO2 ebe obu na nghota na-ekpebi na mgbe onu ikuku a na ikuku na emeputa ihe kariri ogwe 2,5, ọ na-ekpuchi. Ọnọdụ nke njirimara ndị a agaghị arụpụta na ihu igwe dị elu karịa 220ºK, nke dị n'okpuru 273ºC, ọnọdụ nkwụsi ike nke mmiri. Ya mere enweghị mmiri mmiri.
N’ebe ndị ka obere, anyị na-ahụ ọwa mmiri tojubigara ókè, nke bụ nnukwu ihe owuwu ọtụtụ iri kilomita n’obosara na ọtụtụ narị kilomita n’ogologo, na-amalite na mpaghara ọdịda nke ala ahụ. O nwere nsogbu metụtara oke mmiri ahụ na ngwa ngwa nke mmiri echekwara na ala ma na-abịa n'elu ala. Otutu n'ime mmiri a niile n'elu ga-agafe na ikuku site na evaporation, na-abawanye nrụgide na okpomọkụ n'ihi mmetụta griin haus nke alụlụ mmiri, na-ahapụkwa mmiri oyi na CO2 dị na ala Martian.
Nke a ga - eme ka mgbanwe ihu igwe zuru ụwa ọnụ mee ngwa ngwa nke nwere ike ibute oke oke osimiri na ala dị larịị nke Northern Hemisphere, yana nnukwu oghere ice. Oké osimiri ga-emecha furu efu ma eleghị anya site na ịbanye n'ime ala mmiri, na mbara ala ga-alaghachi na ihu igwe "yiri" nke nke ugbu a.
Ọwa mmiri ndị a nke anyị kwuru maka ha pụtara n'ọtụtụ oge n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa, mana emesịa gaa n'ogige oge ochie mepụtara na ihe a maara dị ka Nnukwu Weather Bombardment. Ya mere anyi choputara na nkebi nke oyi na ozara dika nke ugbua, nke etinyekwara ya na ihe mberede nke ihu igwe kariri na odi otutu mmiri di na mpaghara ugwu ka emeghachighariri ya na akuko nke uwa.
Ozi ndi ozo: Ndụ na Mars, ihe akaebe ndị ọzọ na-egosi na enwere ike, Comet 'mmiri mmiri' na-aga Mars
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » N'otu oge, Mars, akụkọ dị mkpirikpi banyere mgbanwe mgbanwe ihu igwe ya
Anthropocene, mmadu okwesiri "inwe" ala nke aka ya?